Degso Browsers Barnaamijyada loogu talagalay Windows
Degso Browsers Barnaamijyada
AdBlock waa sheyga ugu fiican ee xayeysiinta xayeysiinta ah ee aad soo dejisan karto oo aad u isticmaali karto bilaash haddii aad doorbideyso Microsoft Edge, Google Chrome ama Opera oo ah shabakada internetka ee kumbuyuutarkaaga Windows 10. Adoo tirtiraya xayeysiisyada lagu meeleeyay meelaha qaarkood ee bogagga shabakadda, waxay kuu...
Yandex Browser waa shabakad internet oo fudud oo dhakhso badan oo waxtar leh ayna soo saartay mashiinka raadinta ee ugu caansan Ruushka, Yandex. Sida Google Chrome, Yandex Browser, oo lagu dhisay kaabayaasha Chromium, ayaa fiiro gaar ah u leh adeegsigeeda adeegsigiisa fudud. Soodejiso Browser Yandex Waad ku mahadsantahay Yandex Browser,...
Brave Browser wuxuu la taagan yahay nidaamkiisa ku xayeysiinta xayeysiinta, taageerada https ee dhamaan boggaga internetka, iyo furitaanka deg deg ah ee boggaga, loogu talagalay dadka isticmaala ee raadinaya xawaaraha iyo amniga shabakada internetka. Dhagsii badhanka Download Brave ee kor ku xusan si aad u tijaabiso Brave, shabakadda deg...
Browser-ka AVG Secure Browser wuxuu u taagan yahay bog furaha internetka deg deg ah, aamin ah oo gaar ah AVG Browser, oo leh astaamo aan laga helin daalacayaasha caadiga ah ee internetka sida habka qarsoodiga ah, si otomaatig ah u xayiraya xayeysiinta, oo awood u siinaya isticmaalka HTTPS codeynta, ka hortagga qoraallada raadraaca,...
Chromium waa mashruuc fur furan biraawsar oo dhisaya kaabayaasha Google Chrome. Mashruuca biraawsarka Chromium wuxuu ujeedkiisu yahay inuu siiyo dadka isticmaala khibrada internetka ugu fiican noocyo aamin ah, dhaqso badan, oo deggan. Chromium si joogto ah ayaa looga soo saaraa xagga naqshadeynta iyo softiweerka koox horumariyeyaal ah...
Facebook AdBlock waa kordhin adblock ah oo xannibaya xayeysiinta barta Facebook ee aad ku xirmaan biraawsarka. Kordhintaan waxaad ku ordi kartaa barnaamijka biraawsarka Google Chrome ee aad ku isticmaasho kombiyuutarkaaga, waad ka takhalusi kartaa xayeysiiska aad ku daashay ee aad waligaa aragtay. Haddii aadan rabin inaad ku aragto...
Chromodo waa biraawsar internet ah oo ay daabacday shirkadda Comodo, oo aan si wanaagsan ula soconno barnaamijkeeda antivirus-ka, waxayna soo jiidataa dareenka ahmiyadda ay siineyso amniga. Chromodo, oo ah biraawsar aad kala soo bixi karto oo aad si bilaash ah ugu isticmaali karto kombiyuutaradaada, asal ahaan waa biraawsar lagu...
Basilisk waa codsi raadinta websaydhka furan oo furan oo ay abuurtay soosaaraha biraawsarka bilaha ah. Ka sokow inuu yahay biraawsar deg deg ah oo casri ah oo muuqaal buuxa leh, waxay ujeedkeedu yahay inuu ilaaliyo tikniyoolajiyadda waxtar leh ee Firefox. Ku darida, Basilisk wuxuu leeyahay taageero la mid ah XUL / XPCOM kordhinta iyo...
Vivaldi waa biraawsar internet aad u faaiido badan, la isku halleyn karo, cusub oo dhakhso leh oo awood u leh inuu carqaladeeyo isu dheelitirka u dhexeeya Google Chrome, Mozilla Firefox iyo Internet Explorer, oo muddo aad u dheer gacanta ku hayey warshadaha biraawsarka. Browser-ka cusub ee internetka, oo uu soo saaray Jon Von Tetzchner,...
Kordhinta CatBlock, waxaad ku tusi kartaa sawirada bisadaha biraawsarka Google Chrome halkii aad ka hor istaagi lahayd xayeysiinta. Ilaha ugu muhiimsan ee dakhliga degellada waxaa laga helaa xayaysiisyada la kafaala qaaday. Daabacaadda xayeysiinta loogu talagalay adeegga laga bixiyo goobta waa wax iska caadi ah oo loo baahan yahay. Si...
SlimBrowser wuxuu leeyahay qaab aad u fudud marka la barbar dhigo daalacayaasha kale ee internetka. Sidoo kale, SlimBrowser, oo cabirkiisu ka yar yahay daalacayaasha kale ee internetka, ayaa kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh oo aamin ah u dhex mariso internetka. SlimBrowser si dhakhso leh ayuu u furmaa, iyadoo faa iidadiisu tahay...
Opera Neon waa biraawsar internet ah oo ay fikrad ahaan u soo diyaariyeen kooxdii soo saartay biraawsarka internet-ka ee guuleysta Opera. Opera Neon, oo ah biraawsar bilaash ah oo lagu dhisay kaabayaasha Chromium sida Google Chrome iyo Opera, wuxuu na siinayaa khibrad adeegsi oo wax ku ool ah adoo siinaya qaababka aan uga baranay...
TunnelBear waa barnaamij guuleysi leh oo aad u adeegsan karto toosinta taraafikadaada internet-ka isla markaana aad ugu ekaato inaad ka soo gasho internetka waddan kale oo adduunka ah. Sidan oo kale, waad ku qarin kartaa aqoonsigaaga adoo si xor ah uga dhex wareegaya internetka adiga oo aan is aqoon. TunnelBear wuxuu ilaaliyaa...
HTTPS Meel kasta waxaa lagu qeexi karaa inay tahay biraawsar lagu daro oo aad isticmaali karto haddii aad daryeesho amnigaaga internetka. HTTPS Meel walba asal ahaan waxaa looga fikiri karaa nidaam si toos ah u qaadaya taxaddarro iyadoo la hubinayo in boggaga aad ku booqato internetku ay yihiin kuwo ammaan ah iyo in kale. Waad eegi...
Google Chrome Canary waa magaca ay Google u bixisay soosaaraha nooca Chrome. Ka dib markii nidaamka hawlgalka Android loo beddelay naqshadaynta maaddada, Google wuxuu bilaabay inuu cusbooneysiiyo barnaamijyada ay soo saartay, oo ay ugu horreyso YouTube, ka dibna wuxuu bilaabay inuu beddelo naqshadaha barnaamijyada sida Gmail....
Browser Avant waa biraawsar internet oo si otomaatig ah u xannibaya dhammaanba pop-up-yada aan la rabin iyo fiilooyinka fiilooyinka iyada oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay daalacdaan bogag badan oo isku mar ah. Barnaamijkan, oo ka caawiya dadka isticmaala inay nadiifiyaan dhammaan macluumaadka gaarka ah iyo haraaga ay la socdaan...
Pomotodo wuxuu u muuqday sidii liistada liis-kordhinta oo aad ku adeegsan karto Google Chrome. Kordhinta, oo labaduba bilaash ah oo ka dhigaysa biraawsarkaaga aalad kuu ah inaad maamusho shaqadaada u baahan in la qabto, waxay kaa caawineysaa inaad marin u hesho dhammaan mashaariicdaada iyo howlahaaga meel kasta waqti kasta, iyada oo ay...
Maxthon Cloud Browser waa biraawsar biraawsar bilaash ah oo ku guuleystey inuu ku kordhiyo taageerayaashiisa waqti yar mahadsanidiin si buuxda loo habeyn karo adeegsigeeda saaxiibtinimo Intaa waxaa dheer, biraawsarku wuxuu bixiyaa khibrad websaydh xawaare sare leh iyo waxqabadka guud ee wanaagsan ee isticmaalayaasha. Intaa waxaa dheer,...
Ghost Browser waa biraawsar internet awood badan oo shaqeynaya oo aad ku isticmaali karto kombiyuutaradaada desktop-ka. Waad ku xakameyn kartaa dhammaan akoonnadaada daaqad keliya adoo adeegsanaya biraawsarka, kaas oo leh astaamo ka awood badan kan kale. Haddii aad isticmaasho daalacashada internetka kala duwan si aad u hubiso...